Darooga qatar ah oo laga hortagayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Darooga qatar ah oo laga hortagayo
La daabacay tisdag 31 juli 2012 kl 13.20
Hay'ada kastamka Tullverket ayaa bilowday inay iskugu geyso dhamaan tarbarteeda sidii ay uga hortagi lahayd daroogo cusob oo la yiraahdo 5-IT. Ilaa bilowgii bishii abril ayaa daroogadaan laga helay 14 qof oo geeriyootay dalkaan Sweden, kuwoos oo dhamaantood ahaa rag dhallinyaro ah oo iska badiyey daroogadaan.
Daroogadan ayaa laga soo gataa internetka mana ahan mid mamnuuc ah. Lakiin hay'ada caafimaadka bulshada Folkhälsoinstitutet ayaa dowladda talo ahaan ugu gudbisay in daroogadaan la mamnuuco, balse Tullverket ayaa xaq u leh in ay qabtaan oo burbuiryaan daroogooyinka noocaan ah xataa haduusan jirin sharci mamnuucaya. Tullverket ayaa hada il gooniya ku haya daroogadaan 5-IT
- Mar haday badatay dhimashada morugooyinka leh awoodeena ayaan iskugu geynaynaa si aan ugu hortagno , ayuu yeri Lars Hansson oo Tullverket u qaabilsan daroogada.